State Counsellor, Sri Lankan FM discuss promotion of bilateral relations – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor, Sri Lankan FM discuss promotion of bilateral relations
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar received Mr. Tilak Marapana, Minister of Foreign Affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, who is on an official visit to Myanmar, at 10 am on 11 April 2019 at the Ministry of Foreign Affairs.
During the meeting, the State Counsellor and Foreign Minister of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka discussed various issues on promoting bilateral relations in the areas of the economy, tourism, religious affairs, socio-cultural cooperation and enhancing people-to-people contacts. They also discussed enhancing cooperation between Myanmar and Sri Lanka at the regional and multilateral fora including BIMSTEC and the United Nations.
Also present at the meeting were U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, Senior Officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Ambassador of Sri Lanka to Myanmar and members of the Sri Lankan delegation.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ-သီရိလင်္ကာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ တီလက် မာရာပါနာအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်၊ နံနက် ၁၀ဝ၀ နာရီအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-သီရိလင်္ကာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ သာသနာရေး၊ လူမှုယဉ်ကျေးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဘင်းစတက်ခ်အပါအဝင် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ မျက်နှာစာများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး တိုးမြှင့်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သီရိလင်္ကာသံအမတ်ကြီးနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။